Stuart Little (1999) – Burmese Subtitle
PG 1999 84 min Adventure, Comedy, Family
IMDB: 5.9/10 115,443 votes
Bruno Kirby, Chazz Palminteri, David Alan Grier, Geena Davis, Hugh Laurie, Jim Doughan, Jonathan Lipnicki, Michael J. Fox, Nathan Lane, Steve Zahn
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ မိသားစုဟာသဇာတ်မြူးရုပ်ရှင်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
Mr. နဲ့ Mrs. Little တို့က Little မိသားစုနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ့် မိသားစုဝင်အသစ်မွေးစားဖို့အတွက် မိဘမဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို သွားရောက်ရှာဖွေကြပါတယ်။ Stuart ဆိုတဲ့ ကြွက်ဖြူ လေးက အဲဒီမိဘမဲ့ကျောင်းက မိဘမဲ့ကလေးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Little ဇနီးမောင်နှံက Stuart ကိုမွေးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ မိဘမဲ့လေး Stuart ဟာ Little မိသားစုဝင် Stuart Little ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Little အိမ်ကို ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ Little မိသားစုရဲ့ သားဖြစ်သူ George ကတော့ သူနဲ့ သက်တူရွယ်တူတွေလိုဆော့ကစားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ Stuart ကို သဘောမကျခဲ့ပါဘူး။ အဲလိုပဲ Little အိမ်က ကြောင်လေး Snowbell ကလည်း Stuart ကို အမြဲ အမြင်မကြည်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုအဆင်မပြေမှုတွေကို Stuart ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ… အဲလိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့ ဘယ်လိုပြဿ နာတွေ ကြုံတွေ့ရမလဲ… Stuart နဲ့ သူချစ်ရတဲ့ Little မိသား စုတို့ ရဲ့ ပြဿ နာတွေနဲ့ မိသားစုမေတ္တာတွေကို ကြည့်ရှုရမယ့် မိသားစုဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
Review Credit to Gold Channel
Bruno Kirby Chazz Palminteri David Alan Grier Geena Davis Hugh Laurie Jim Doughan Jonathan Lipnicki Michael J. Fox Nathan Lane Steve Zahn
Option 1 drive.google.com 1.31 GB 1080p
Option2megaup.net 1.31 GB 1080p
Option3mega.nz 1.31 GB 1080p
Option4onedrive.live.com 1.31 GB 1080p
Option5mshare.io 1.31 GB 1080p
Option6mediafire.com 1.31 GB 1080p
Option7pcloud.com 1.31 GB 1080p